linux တွေမှာ ISA လိုမျိုး proxy server ရှိလား- စာမျက်နှာ2- MYSTERY ZILLION
Squid server ဆိုတာ အရမ်းမိုက်တယ် Netwok Card4Card လောက်နဲ့ Wan ကို loadbalancing လုပ်ပေးနိုင်တယ်
Bagan လာလာ mpt လာလာ မတူတဲ့ ISP Wan link တွေကိုပါ handle လုပ်ပေးနိုင်တယ် :P
ခက်တာက ကျနော် က Window2003 နဲ့ တွဲတင်ပီး တင်ချင်တာ
သေချာသိချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ
လုပ်ဘူး တဲ့အကိုတွေ ရှိရင်လည်း နည်းပညာလေးမျှပေးကြပါ
အစ်ကိုတို ့ရေ။ တစ်ခုလောက်အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Squid နဲ ့ပတ်သက်လို ့အရမ်းစိတ်၀င်စားတယ်။ လုပ်လိုက်တိုင်းလည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို ့ဗျာ။ အဲဒါလေးကို ebook လိုမျိုးလုပ်ပြေီးတော့တင်ပေးပါလားဗျာ။ တကယ်ပါ။ ကျွန်တော့မှာအင်တာနက်အ၀င်ရတဲ့ Nic ip က 192.168.9.225 ပါ။ Lan အတွက်ပေးသုံးတဲ့ အိုင်ပီ ကတော့ 10.1.1.1 ပါ။ အဲဒါလုပ်ကြည့်တာအဆင်မပြေဖြစ်နေလို ့ပါ
ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြန်ပြီး share လုပ်ပေးကြပါဦးနော်။
မင်္ဂလာပါ MZ မန်ဘာအကိုအမတို့ရေ ...အကူအညီတောင်းချင်လို့ပါဗျို့ ။
ကျွန်တော် Ubuntu မှာ squid proxy configure လုပ်တာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။
ကျွန်တော်သုံးတဲ့အင်တာနက်က proxy number နဲ့ သုံးရပါတယ်။
ကျွန်တော် အင်တာနက်ရဖို့အတွက် browser မှာဆို host number and port ထည့်ပေးရတယ်။
အဲဒီအခါ သူက username and password တောင်းပါတယ်။ အဲဒါလေး မှန်အောင်ထည့်မှ အင်တာနက်ရတာပါ။
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်စက်မှာ squid proxy run ပြီး အင်တာနက်ကို ပြန်ပေးပြီး access control တွေလုပ်ချင်တာပါ။
ကျွန်တော့်မှာ NIC တစ်ကဒ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်စက်ကနေ LAN ထဲက Client တွေက အင်တာနက်ကို ယူသုံးစေချင်တာပါ။
ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နည်းက ကျွန်တော့် network address ip ကို client စက်ရဲ့ browser ကနေထည့်ပြီး ဖွင့်ကြည့်စေတာပါ။ port ကလဲ ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ ။ ဒါပေမဲ ့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။
parent proxy ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် cache_peer မှာလဲ ကျွန်တော့် proxy host ထည့်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အောက်မှာ ဆွေးနွေးထားတဲ့ ကိုမာ့ခ်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်လဲ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
သိတဲ့သူများ ကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာ ။
configure တွေကတော့ အောက်ကပြောတဲနည်းတွေနဲ့ အကုန်လုပ်ပြီးပါပြီး ၊ မရလို့ပါခင်ဗျာ ။
အင်တာနက်မှာတွေ့တာတွေလဲ စမ်းတာ တစ်ခုမှ အဆင်မပြေလို့ပါခင်ဗျာ ။
ပထမဆုံး လိုအပ်တဲ့အချက်အနေနဲ့ NIC နှစ်ကဒ် ရှိဖို့လိုမယ်ဗျ.. WAN အတွက်တစ်ကဒ် .. LAN အတွက်တစ်ကဒ် .. Cache Peer မှာက parent proxy ထည့်တာကိုပြောတာထင်တယ် ... နယ်က MPT သမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့လိုပါတယ် (203.81.72.200:8080) ပေါ့ .. Client တွေအတွက်က Squid တင်ထားတဲ့ စက်က LAN IP ကို Browser မှာထည့်ပေးရပါမယ် .. port ကိုတော့ Squid Conf ထဲမှာကြေငြာပေးရပါမယ် .. အဆင်ပြေရင် အစ်ကို့ Config ကို တစ်ချက်တင်ပေးထားပါလား ။။
ကျေးဇူးပဲအကိုရေ .. အခုတော့ ကျွန်တော် အဆင်ပြေသွားပါပြီး ။ ကိုရာမညဖိုးလပြည့်ဘလော့မှာ ရေးထားတာလေး ဖတ်ပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်တာပါ။
first of all, နက်ဝပ်ကဒ် ၂ခုလိုမယ်။ 1 for outside(connected to internet) and 1 for inside lan(to Hub),
should already assigned IP Address for each, outside interface IP can be from DHCP.
It depend on y,our internet access,
If you use ADSL or Network Cable, you need2NIC.
If you use D-Link SIM Card Router, only 1 NIC
Important : you need to choose Network Adapter 1 and 2
Linux မှာ ISA လို proxy server တွေအများကြီးရှိပါတယ်
ဉပမာ။ ။ IPCop: clearOS : PFsent .......